Glasslock (RG726) Noodle Mug - 705 ML | Buy online | SHOP.COM.MM
Glasslock (RG726) Noodle Mug - 705 ML
ခေါက်ဆွဲခြောက်ထည့်၍ ၃မိနစ်ခန့် အဖုံးအုပ်ပြီးစားသုံးနိုင်ပါသည်။
Glasslock ခေါက်ဆွဲပြုတ် ပန်းကန်
မြန်မြန်ဆန်ဆန်လေး ခေါက်ဆွဲပြုတ်စားချင်ရင်တော့ ဒီပန်းကန်လုံးလေး ၀ယ်ထားသင့်ပါတယ်။ ဖန်သားလဲအရမ်းကောင်းတော့ လွယ်လွယ်နဲ့မကွဲဘူးလေ။ Read more Hide
(RG726) ????????????????? ??????????? - 705 ML
Specifications of (RG726) Noodle Mug - 705 ML